Keiko Tsuyama: Japoney Mpanao Gazety Any Etazonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2014 3:57 GMT
Vakio amin'ny teny русский, 日本語, Français, Español, English
I Keiko Tsuyama, ilay Japoney mpanao gazety any New York. Sary nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Nahavita nanamboatra ho avy tsara rafitra amin'ny lafiny asa sahala amin'ny hoe varavarakelin'i Japana any Amerika ilay mpitatira vaovao Keiko Tsuyama. Avy any Japana ny niaviany, izay matetika latsaky ny 3 isan-jaton'ny toeran'ny mpitantana eo amin'ny sehatry ny asa no tantanan'ny vehivavy, ary 15 isan-jaton'ireo mpanao gazety miasa amin'ny fotoana feno ihany no vehivavy, tsara marihana mihitsy izy: Tsuyama no Japoney vehivavy voalohany niasa ho mpanoratra momba ny fandraharahàna ho an'i Kyodo, gazety lehibe indrindra ao amin'ny firenena.
Ary any Japana, firenena izay ahitana olona vitsy matetika no mahay miteny fiteny vahiny, manome làlana an'i Tsuyama hanome ny fomba fijeriny manokana momba ny tany ivelan'i Japana ny fahaizany miteny tsara ny fiteny Anglisy sy Frantsay. Mpandray anjara taloha tao amin'ny Wall Street Journal Japan, ankehitriny, mpandray anjara matetika ao amin'ny AERA i Tsuyama izao, iray amin'ireo gazetiboky mivoaka isan-kerinandro maro mpamaky indrindra any Japana.
Niresaka tamin'i Tsuyama aho, izay mipetraka any New York, momba ny asany, ny firenena niaviany ary ny fotoana iray nitafatafàny tamin'i Mark Zuckerberg, ilay mpamorona ny Facebook .
Nevin Thompson (NT): Mba ilazalazao ny mombamomba anao hoe izahay azafady.
Keiko Tsuyama (KT): Mpanao gazety aho, mpanoratra, mpamorona lahasoratra, ary mpaka sary, ary Solontenan'ny Fandriampahaleman'ny Tanànan'i Nagasaki. Mipetraka ao New York aho, ary amin'izay dia manoratra ny momba an'i Etazonia ho an'ireo Japoney izay tiany ho fantatra aho.
Miompana bebe kokoa amin'ny tantaran'ny fiainan'ny zanak'olombelona aho, ny teknolojia, ary ny resaka malaza eo amin'ny media.
NT: Avy any Japana no niavianao. Ahoana no nataonao ka niafaranao ho mpiasa mahaleotena mipetraka ao New York?
KT: Zatra niasa tamin'i Kyodo News aho. Mpamoaka vaovao lehibe indrindra any Japana io, ary manana mpitati-baovao miisa 900 eo ho eo. Ny taona 2003 ka hatramin'ny 2006, mpampita vaovaon'i Kyodo aty New York aho.
Ny tena marina, tsy tia ny ho alefa tany New York aho ny taona 2003 – taorian'ny nanokafan'ny filoha Bush ny adiny tany Iràka mihitsy. Fa vao tonga tao amin'ny tanànan'i New York aho, tena tonga dia tia be nipetraka tao.
NT: Niala tamin'ny asanao tao amin'i Kyodo ianao nony farany, mba hanao mpiasa mahaleo tena tsy raikitra aloha. Fa nahoana?
KT: Nankany amin'ny tanànan'i New York amin'ny maha mpiasa tsy raikittra fa mahaleotena aho, satria nanana hevitra mombanà tantara tena tiako soratrana. Satria mpiasa rakitra mpitondra vaovao aho, misy hatrany ny fe-potoana tsy maintsy tratrarina ary kely fotsiny ny fotoana ahafahana manoratra tantara tena mafonja.
Na dia nanoratra tantara mafonja ihany aza aho fony aho niaraka tamin'ny Kyodo tao New York, nisy tantara maro tiako notantaraina hatrany.
Noho izany, ny taona 2006, rehefa naverin'i Kyodo tany Tokyo indray aho ary tonga ny fotoana nialàko ny tanànan'i New York, nanapa-kevitra ny hijanona tao aho ary mitady tantara vaovao hafa hatrany.
NT: Mora ve ny mamaky ny sehatry ny fiasàna tsy raikitra atao amin'ny fotoana feno?
KT: Tsy nahafantatra mpamoaka asa soratra tany Japana aho, ary ny zava-nisy dia avy tamin'ny Newsday any New York ny asa voalohany nampiandraiketina ahy. Resaka amin'ny teny Anglisy momba ny ady tany Iraka ilay izy. Izay no niantombohako amin'ny maha mpiasa tsy raikitra ahy.
Nandeha tsikelikely teo, avy tamin'ny alalan'ny tambajotrako, nampifandraisana tamin'ireo mpamoaka asa soratra tany Japana aho ary ireo talen'ny fandaharana amin'ny fampielezampeo (Matetika angatahana hiakatra an-tsehatra ho mpanentana fanehoankevitra amin'ny fampielezampeo aho), avy eo AERA.
NT: Inona izany AERA?
KT: Mitovy amin'ny New York Times Magazine fa any Japana ny AERA. Fandaharana tena tsara mivoaka isan-kerinandro atolotr'i Asahi io, iray amin'ireo masoivoho lehibe indrindra mpamoaka vaovao any Japana.
NT: Nanamafy ny fijanonanao tamin'ny maha mpiasa tsy raikitra anao izany ny nahazoanao asa nampiandraiketana anao avy tamin'ny AERA..
KT: Mila olona afaka mampiasa ny traikefany arak'asa ary ny fanofanana azony mba hanoratra “tantara marina” daholo ireo mpamoaka asa soratra rehetra.”
Nilaza tamiko ny AERA hoe “Fatratra ianao, satria tsy mila tsaraina izany intsony ny tantaranao, amin'ny resaka anaranà orinasa/olo-malaza sy tarehimarika.”
NT: Hatreto, inona no asa tsara nampiandraiketina anao, nandritra ny naha mpiasa tsy raikitra anao??
KT: Nitafatafa niaraka tamin'i Mark Zuckerberg aho taona maromaro izay. Tonga fotsiny tamin'izao tsy niomànana – talohan'ny namoahana ho an'ny daholobe ny Facebook, ary teo am-panomanana hetsika nikendreny ireo mpampiasa vola. Nila nanao tafatafa manokana ho an'i Japana ny Facebook ary azon'i AERA izany.
NT: Ohatra ny ahoana ny mitafatafa aminy?
KT: Miteny haingana be izy. Tena nahafinaritra ahy iny, fa tena tsy mitovy amin'ireo mpitafatafa matetika miaraka amiko izy. Tia hametraka fanontaniana aho, avy eo tonga dia tian'i Zuckerberg ho fantarina hoe ny antony nametrahako izany fanontaniana izany, ny tontolo manodidina azy sy ny antony ao ambadik'izay.
Mandinika ahy tsara izy avy eo, sahala amin'ny hoe misy bibikely amin'ny oroko, raha hanome ny valinteniny izy. Avy eo manomboka miteny haingana dia haingana izy.
Na dia izany aza, na inona na inona resahan'i Zuckerberg, manao fanamarihana mazava tsara foana izy. Hitako mihitsy hoe mihazakazaka be ny atidohany, ary afaka lazaiko amin'ny teny tsongainy fa tena marani-tsaina tokoa izy, ary safidy tsara ho eo amin'ny fitarihana ny Facebook.
NT: Mpitondra tenin'ny Fandriampahalemana ho an'i Nagasaki ianao. Avy any Nagasaki angaha ianao?
KT: Tsia, avy any Tokyo aho. Na dia izany aza, ny taona 1988, nanomboka ny asako niaraka tamin'i Kyodo, nitana ny maha-mpanao gazety momba ny resaka heloka bevava tany Fukuoka sy Nagasaki tamin'izany (tanàna mpifanila vodirindrina ao amin'ny nosin'i Kyushu), ary nifandray tsy tapaka tamin'ireo olona nihaonako tany aho.
Vao haingana, niasa an-tsitrapo nanao mpandika teny ho an'ny hibakusha aho (ireo nieren-doza tamin'ny baomba ataomika tany Hiroshima sy Nagasaki) izay nitsidika ny tanànan'i New York City nandritra ny hetsika.
Dia sahala amin'izay no nahatonga ahy natao ho mpitondra tenin'ny Fandriampahalemana an'i Nagasaki aho. Ao anatin'ny andraikitro, mandray anjara amin'ny fanafoanana ny fitaovam-piadiana nokleary aho, ary miresaka any ivelany misolo tena ny mponin'i Nagasaki.
NT: Inona ny tantara azo velabelarina any Japana amin'izao fotoana izao raha hoe mila mijery any ny olona maneran-tany ?
KT: Ilay fanapahan-kevitra ny hanorina toby miaramila Amerikana any Henoko ary Oura Bay any amin'ny faritanin'i Okinawa. Raha novolavolaina ho an'ny Morony Atsinanana na ny Morony Andrefanan'i Etazonia io tetikasa io, tsy ho eken'ireo Amerikana velively. Nahoana no Henoko?.
Hampisy fahapotehana zavatra maro amin'ny tontolo iainana io fanapahan-kevitra hanorina toby miaramila Amerikana ao Henoko io. Tonga saina kokoa momba ny tontolo iainana ny olona aty Amerika.
Na dia izany aza, any Okinawa, lavitra an'i Amerika, io tetikasa io no miseho, ary tiako hahalala ny olona, ary eo ampanaovana lahatsary amin'ny teny Anglisy aho izao izay ho akariko ao amin'ny YouTube.
NT: Iza avy ireo Japoney mpanao gazety mety hahaliana ireo mpamakin'ny Global Voices?
KT: Tanaka Ryusaku (@tanakaryusaku), Ugaya Hiro (@hirougaya), ary Iwakami Yasumi (@iwakamiyasumi), samy manao asa mahavariana sy tsara daholo izy ireo amin'izao fotoana izao. Raha afaka mamaky fiteny Japoney ianao, mba jereo ange izy ireo e! Raha tsy izany, manantena aho fa hadikan'i GV ny sasany amin'ireo lahatsoratrany!
Tao an-tanànan'i New York, ny 20 Septambra, hampiaina ny tafatafa miaraka amin'ilay mpamokatra sarimihetsika Soda Kazuhiro i Tsuyama, momba ilay sarimihetsika “The Gift from Beate“(ny fanomezana avy amin'i Beate), izay mamakafaka hoe ahoana ny fiantraikan'ny zavatra ataon'ilay mpanolotra taokanto, Beate Sirota Gordon, amin'ny “Lalam-panorenan'ny Fandriampahalemana” ao Japana taorian'ny ady. Azo jerena ao amin'ny @keikoworld ato amin'ny Aterineto i Tsuyama.